Iapile iphone se iyafumaneka nge- $ 49.99 nje kwi & t ehlawulwa kwangaphambili
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isivumelwano: I-AT & T ibonelela nge-iPhone SE nge-49,9 yeedola kuphela kuhlawulwa kwangaphambili
Iindaba ezimnandi zabathengi abathanda i-iOS ngaphezulu kwe-Android, njengoko i-AT & T iqhuba isivumelwano esimangalisayo kwenye yeephones ezingabizi kakhulu onokuzifumana kwezi ntsuku, i-iPhone SE. Ukuba awukhathali ngescreen esincinci, ungayifumana ngoku nge-AT & T ehlawulelwa i $ 49.99 nje.
Isivumelwano siyafumaneka de kube nguSeptemba 27, ke kukho ixesha elininzi lokuthatha isigqibo sokuba uyafuna okanye awufuni IPhone SE , nangona kukho izinto ezimbalwa onokufuna ukuzazi. Okokuqala, isivumelwano sikhangeleka ngathi siyafumaneka kwivenkile kuphela, ke awuzukuyifumana kwi-intanethi.
Okwesibini, ukuze ufanelekele ukuthengiselana, kuya kufuneka usebenze umgca omtsha wenkonzo kuso nasiphi na isicwangciso senyanga kwaye uthenge i- $ 30 okanye enkulu yokugcwalisa ikhadi. Nangona kunjalo, ukufumana IPhone SE kuba i $ 49.99 nje iyamangalisa xa ucinga ukuba uninzi lwabathwali basayithengisa nge $ 350 ngqo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ukwenziwa komgca omtsha kunye ne- $ 30 okanye enkulu yokugcwalisa ikhadi kufuneka kuthengwe kwintengiselwano efanayo ukuze ukwazi ukuthenga i-iPhone SE nge- $ 49.99 nje. Uyonwabele ukuthenga!
I-Apple iPhone SE
umthombo: I-AT & T nge Ifowuni
Isamsung igcina ukongeza iibhonasi zoku-odola kwangaphambili kwi-Galaxy S20
Elona Dili lililo leNtloko yeAmazon ye-Amazon yeNtloko: Usuku oluhlaziyiweyo 2
I-Samsung Galaxy S21 kunye ne-Apple iPhone 12
Ukucima, ukuqala kwakhona, okanye ukuseta kwakhona i-Samsung Galaxy S20 yakho
Ezona zixhobo zeVR zokujonga iividiyo zokwenyani kunye nokujonga iifoto kwi-Android